कोरोनाले बिथोलेको पिरती: लकडाउनमा ‘लभ-डाउन’
अस्मिता खड्का/सुमित सुवेदी
विश्वव्यापी महाव्याधि कोभिड–१९ को असर आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा मात्रै परेको छैन। यसको असर परिवार र प्रेम सम्बन्धमा समेत देखिन थालेको छ। वैशाखमा हुने विवाहका मिति सारिएका छन्। प्रेमी–प्रेमिका एकअर्कालाई भेट्न नपाएर छटपटिएका छन्।
लगनमा लकडाउनको प्रहार
सानैदेखि काठमाडौँ,अनामनगर बस्दै आएकी छिन्, भारत, बिहारकी २६ वर्षीयानिभा मण्डल।आमाबुबासँगै अहिले उनी पनि चिन्तित छिन्। कोरोना र लकडाउनको त्रासभन्दा बढीचिन्ता उनलाईआफ्नो बिहेको लगनको छ। निभाका हुनेवाला दुलाहा बिहारका हुन्। वैशाख अन्त्यतिर लगनगाँठो कस्ने निधो गरेका उनीहरूले गत माघमा औँठीसाटासाट गरेका थिए।यो लगन कटेपछि आफ्नो बिहे कहिले हुने टुंगो नभएको उनले बताइन्।‘बिहेको सबै सपिङ गरिसकेका थियौँ,’ निभाले भनिन्, ‘वैशाखको पहिलो साता बिहार जाने योजना थियो। अब यस्तो बेलामा न बिहे गर्न मिल्यो, न भोजभतेर, न जमघट।’
निभा र उनका भावी श्रीमान्ले बिहेपछि विभिन्न ठाउँ घुम्ने योजना बनाएका थिए। ‘बिहेका लागि हामीले धेरै योजना बुनेका थियौँ,’ उनले सुनाइन्, ‘हनिमुनका लागि भारतको गोवा र त्यसपछि नेपालका मुख्य–मुख्य ठाउँघुम्ने सोच बनाएका थियौँ। कोरोनाले गर्दा हाम्रो योजना र सपना चकनाचुर भयो।’
अहिले हुनेवाला श्रीमान्सँग निभा फोनमा कुरा गर्छिन्। सँगै हुन नपाएपनि सम्बन्धलाई कायम राख्नफोनबाट कुराकानी गरिरहने उनले बताइन्। ‘ऊ र उसको परिवारसँग ह्वाट्सएपबाट कुराकानी गरिरहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ सम्पर्क हुन नसकेर नियमित कुरा हुन नपाउँदा छटपटी हुन्छ। ‘तेरो हुनेवाला दुलहाले अरूसँगै बिहे गर्ला है, होस गर्’ भनेर साथीहरूले जिस्काउँदा मन अत्तालिन्छ।’ यस्तो बेलामा उनलाई हुनेवाला श्रीमान्लेसान्त्वना दिन्छन्।‘साथीहरूले भनेको कुरा सुनाउँदा उसले मलाई सम्झाइबुझाइ गर्छ,’ उनले भनिन्,‘लकडाउन खुल्नेबित्तिकै मन्दिरमै गएर भए पनि बिहे गरेर सँगै बसौँला भनेको छ। तर, लकडाउन खुल्ने कहिले हो, कहिले ? त्यसमाथिखुल्नेबित्तिकै भारत र नेपाल आउजाउ गर्न पाइने हो कि होइन?’
विवाहको लगन वैशाखमै तय गरेका अर्को जोडी हुन्, सिन्धुपाल्चोकका ध्रुव क्षत्री र उनकी प्रेमिका रेनुखतिवडा। आफ्नो पाँचबर्से प्रेमसम्बन्धलाई यही वैशाखमा बिहेमा परिणत गर्ने योजना उनीहरूले बनाएका थिए। तर,लकडाउनका कारण आफूहरूको योजना पूरा नभएको ध्रुवले बताए।‘बिहे गर्ने उचित उमेर यही हो भनेर बिहेको निर्णयमा पुगेका थियौँ,’ उनले सुनाए, ‘लकडाउनले बिहे रोकिएपछि अहिले हाम्रो अधिकांश समय च्याट र भिडियो कलमै बित्ने गरेको छ।’
सुरक्षा ब्वाइफ्रेन्डसँग कहिले छतमा गएर फोनमा कुरा गर्छिन् त कहिले कोठाभित्रको कुनाकाप्चामा। देशमा लकडाउन सुरु भएसँगै परिवारका सबै सदस्य चौबीसै घण्टा घरमै बस्न थालेपछि उनलाई ब्वाइफ्रेन्डसँग फोनमा कुरा गर्न कुनाकानी खोज्नुपर्छ।
उनीहरूले आफ्नो प्रेमसम्बन्धबारे परिवारका सदस्यलाई थाहा दिएका थिएनन्। गत माघमा ध्रुव र रेनुले अभिभावकलाई आफ्नो सम्बन्धबारे सुनाएका थिए। परिवारको मञ्जुरीमा दुवैले बिहेको तयारी गरिरहेका थिए।‘परिवारमा हाम्रो सम्बन्धबारे खुलासा भएपछि विवाहका लागि चाहिने सामग्री किन्ने तयारी सुरु हुँदै थियो,’ धु्रवले भने, ‘वैशाखमा गर्ने भनेर बिहेको तिथिमितिफिक्स्ड थियो। दुवै परिवारमा एकखाले उत्साह थियो। तर, कोरोनाले चौपट बनाइदियो।’ उनीहरू दुवैजना काठमाडौँमा बस्छन्। एउटै शहरमा बसेपनि अहिले भेटनभएको एक महिना बितिसक्यो। दुवैजना छिट्टै भेट्ने प्रतीक्षामा छन्।
छटपटिएका प्रेम जोडी
भक्तपुर,नयाँ थिमीमाबस्ने किरणअर्याल प्रेम सम्बन्धमा रहेकोपाँच वर्ष भयो। उनकी प्रेमिका नेपालगञ्जमा बस्छिन्।लकडाउनले गर्दा आवतजावतमा बन्देज लागेपछि किरणले आफ्नी प्रेमिकालाई भेट्न पाएका छैनन्। लकडाउनले गर्दा प्रेमिकालाई भेट्न नपाएकोमा निकै दुःख लागेको उनले बताए। ‘म अफिसको कामले नेपालगञ्ज हप्ताको एकचोटि गइरहन्थेँ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ उनी पनि मलाई भेट्न आउँथिन्। अहिले त भेट्न नपाएको पनि एकमहिना भइसक्यो। उनलाई नभेट्दाएक महिना पनि एक वर्षजस्तो हुँदो रहेछ।’ उनीहरू बीच अहिलेफोनमा कुराकानी हुन्छ। ‘फोनमा घण्टौँ कुराकानी गर्छौं,’ उनले सुनाए, ‘मेसन्जरमा भिडियो कल र च्याट गर्छौं। तर, प्रत्यक्ष भेटेजस्तो मिठास फोन, भिडियो कल र च्याटबाट पाइँदैन। आजकाल त फोनमा कुरा गर्न पनि झिँजो लाग्न थालिसक्यो।’भर्चुअल डेटिङले सम्बन्धमा खटपट आउन थालेको अनुभव किरणले गर्न थालेका छन्। ‘फोन र मेसेजमा अनावश्यक तर्क–वितर्क गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सानो कुरामा पनि झगडा हुन्छ। झगडा परेपछि उनी न फोन उठाउँछिन्, न मेसेजरिप्लाई गर्छिन्।’लकडाउन नभएको भए भेटेर प्रेमिकालाई ‘सरप्राइज’ दिन्थे, किरण। ‘भेट्न पाएको भए भेटेर फकाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने,‘अहिले त ‘रिसाए नि रिसाओस्, हेरौँ कति दिनसम्म नबोली बस्दिरहिछे’ भन्ने लाग्छ। फकाउन खासै मेहनत गरिँदैन।’
हिजोआज काठमाडौँ,गल्कुपाखाकासुदर्शन सिंहको प्रेम सम्बन्ध धरापमा छ। यसको एकमात्र दोष उनी लकडाउनलाई दिन्छन्। सुदर्शनको दिनचर्या पहिलाभन्दा फेरिएको छ। उनी राति अबेर सुत्छन्। बिहान मस्त निद्रामा हुन्छन्। उनकी गर्लफ्रेन्डको भनेसबेरै उठ्ने बानी छ। ‘बिहानै गर्लफ्रेन्डको कलले निद्रा हराम हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनी बिहानै उठेर योग र ध्यान गर्ने भएकाले मलाई पनि बिहानै उठाउँछिन्। त्यही कुरामा बिहानैदेखि झगडा सुरु हुन्छ। दिउँसो पनि परिवारसँग एकछिन समय बिताउँदा फोन गरेन भनेर रिसाएर बस्छिन्।’
सुदर्शनको प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको दुईवर्ष भयो। काठमाडौँ स्थायी बसोबास भएकी उनकी प्रेमिका योग प्रशिक्षक हुन्। उनीहरूको अन्तिम भेट लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन भएको थियो। त्यसदिनदेखि दुवैले एकअर्कालाई भेट्न पाएका छैनन्। अरू बेला साथीभाइ र प्रेमिकासँग समय बिताए पनि यो समय सुदर्शन परिवारसँग बिताउन चाहन्छन्। ‘परिवारसँग हाँसखेल गर्ने, रमाउने समय यही हो,’ उनले भने, ‘तर, गर्लफ्रेन्डले जतिबेला पनि फोन गरेहुन्थ्योजस्तो गर्छिन्। हरेक समय फोनबाटै यसो गर्, उसो गर्भनिरहन्छिन्। यसो हुँदा मलाई आफ्नो ‘पर्सनल स्पेस’ नै खोसिएजस्तो लाग्न थालेको छ।’ रिसको झोकमा कहिलेकाहीँ गर्लफ्रेन्डलाई हप्काउछन् पनि।‘अरू बेलाजस्तो भए यति बेलासम्म ब्रेकअप भइसक्थ्यो,’ उनले भने,‘तर, कोरोनाले दुःखी बनाएको बेला थप किन दुःखी हुनु भनेर चुप लागेको छु।’
ललितपुर, लुभुकी सुरक्षा अधिकारीलाईलकडाउनमा आफ्नो लभ जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ। उनी ब्वाइफ्रेन्डसँग कहिले छतमा गएर फोनमा कुरा गर्छिन् त कहिले कोठाभित्रको कुनाकाप्चामा। देशमा लकडाउन सुरु भएसँगै परिवारका सबै सदस्य चौबीसै घण्टा घरमै बस्न थालेपछिउनलाई ब्वाइफ्रेन्डसँग फोनमा कुरा गर्न कुनाकानी खोज्नुपर्छ।चार महिनाअघि मात्रै प्रेममा परेकी उनलाई फोनमा कुरा गर्ने मौका नमिलेर समस्या परेको छ। ‘लकडाउनअघि ममीबाबा अफिस जानुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सबैजना दिनभर घरमै बस्नुहुन्छ। उहाँहरूका अगाडि ब्वाइफ्रेन्डसँग बोल्न पनि नमिल्ने। लुकेर फोन गर्दा कतैबाट कोही आइहाल्छ कि भन्ने डर लाग्छ। कोही आइहाल्यो भने पनि केटी साथीसँग कुरा गरेको जसरी गर्छु।’
उनीहरूले भिडियो कल गर्न नपाएको हप्ताँै भइसक्यो। ‘भ्वाइस कल गर्दा त डराई–डराई गर्नुपर्छ,’ उनले सुनाइन्, ‘भिडियो कल त झन् कहाँबाट गर्न पाउनु? एकदिन भिडियो कल गर्दागर्दै ममी कोठामा आएर ‘कोसँग कुरा गरेको’ भनेर सोध्नुभयो। मेरो त सातोपुत्लो गयो। त्यो दिनदेखि भिडियो कल गरेकी छैन।’ उनीहरू आजभोलि धेरैजसो मेसेजमा कुराकानी गर्छन्।‘ऊकोठामा एक्लै बस्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले उसले धेरैजसो मलाई फोननै गर्छ। उठाउन नमिलेर फोन काटिदिन्छु। यत्तिकैमा हाम्रो झगडा पर्छ। म ‘मेरो कुरा किन नबुझेको’ भन्छु, ऊ‘मेरो फोन किन नउठाएको’ भनेर रिसाउँछ।’
जति टाढा, उति माया गाढा
ललितपुर, पुल्चोक बस्नेपारस थापाको डेटिङ शैलीमा अहिले परिवर्तन आएको छ।ठमेलस्थित एउटाट्राभल एजेन्सीमा काम गर्थे, उनी। कामकै सिलसिलामा उनको भेटकपनकी रमिलासँग भएको थियो।लकडाउन सुरु हुनुभन्दा छ महिनाअघि उनीहरू प्रेममा परेका थिए। उनीहरू दिनहुँभेट्ने गर्थे।रेस्टुरेन्ट जान्थे, फिल्म हेर्थे।‘छोटो समयमै निकै नजिएका थियौँ,’ पारसले भने,‘दिनहुँ भेट्ने बानी परेको थियो। प्रेम साटासाट गर्न नपाउँदै कोरोना सुरु भयो। एक्कासि गर्लफ्रेन्डसँग छुट्टिएर बस्नुपर्‍यो। कहिलेकाहीँ त लकडाउन तोडेरै भेट्न जाऊँजस्तो पनि लाग्छ।’
पारसको मोबाइलमा बिहानै गर्लफ्रेन्डले गरेको फोनको घण्टी बज्छ। उनको हरेक अपडेट रमिलालाई चाहिन्छ। ‘भौतिक रूपमा टाढिएपनि हामी भावनात्मक रूपमा नजिकिएका छौँ,’ पारसले भने, ‘दिनमा पाँचछ पटक फोन र मेसेन्जरमा गफगाफ भइरहन्छ। हामी जति टाढा भएपनि हाम्रो माया भने गाढा हुँदै गइरहेको छ। लकडाउनले हाम्रो लभमा खासै असर गरेको छैन।’ भर्चुअल संसारले आफूहरूको पे्रमलाई निरन्तरता दिन सघाएको उनले बताए। ‘फोन र इन्टरनेट नभएको भए हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘मोबाइल र इन्टरनेटले हामी टाढा भएपनि नजिकै भएजस्तो आभास दिलाएको छ। लकडाउनअघि भेट भएपनि यतिधेरै गफगाफ हुँदैनथ्यो। तर, अचेल हाम्रो पहिलाभन्दा धेरै कुराकानी हुन्छ। यो लकडाउनले एकअर्कालाई चिन्ने मौका दिएको छ।’
गत फागुनमा अन्तर्जातीय विवाह गरिन्, काठमाडौँ, मैतीदेवी बस्ने इलामकी गीता सुब्बाले। आफ्ना प्रेमी जीवन पोखरेलसँग करिब आठवर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई उनले विवाहमा परिणत गरिन्। विवाहअघि पनि उनीहरू‘लङ डिस्ट्यान्स रिलेसनसिप’मा थिए। गीताको कर्मथलो काठमाडौँ थियो। जीवनधनकुटामा बसेर काम गर्थे। उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिएको ४५ दिनमै लकडाउन सुरु भयो।‘बिहेको केही समयपछि उहाँ धनकुटा जानुभयो,’ गीताले सुनाइन्, ‘उहाँको कामबाट हत्तपत्त छुट्टी नै मिल्दैन। लकडाउनको एकसाताअघि हाम्रो भेट भएको थियो। त्यसपछि उहाँ उतै रोकिनुभयो, म यतै रोकिएँ।हामीले निकै कम समय मात्रै एकअर्कासँग बिताउन पायौँ।’
विवाहपछि पनि टाढिएर बस्नुपरेकोमा आफूलाई निकै नमज्जा लागेको उनले बताइन्। ‘विवाहअघि पनि हामी आ–आफ्ना करिअरमा व्यस्त थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘माया, विश्वासले हाम्रो सम्बन्ध टिकेको थियो। बिहेपछि दुवैले एउटै शहरमा काम गर्ने योजना बनाएका थियौँ। तर, लकडाउनले भेट हुनसमेत दिएन।’दाम्पत्य जीवन सुरु भए पनि श्रीमान् र उनको परिवारसँग समय बिताउन नपाएकोमा उनले गुनासो गरिन्। लकडाउनले सामाजिक र भौतिक दूरी बढाए पनि सम्बन्धमा भने कुनै असर नगरेको उनले बताइन्। ‘एकअर्कालाई भ्वाइस मेसेज पठाउँछौँ,’ उनले भनिन, ‘फोन गरेर विगतका दिन सम्झन्छाँै। एकअर्काको स्वास्थ्यको ख्याल राख्छौँ।’
प्रेमिकालाई दूधकोगाडीमा भेट्न जाँदा
काठमाडौँ,कीर्तिपुरका सोनम तामाङ दुई वर्षयता प्रेम सम्बन्धमा छन्। लकडाउनअघि प्रेमिकासँग उनको भेटघाट नियमित हुन्थ्यो। हप्तामा एक पटक जसरी पनि भेट्थे। अहिले भेट्न नपाएको एक महिना बितिसक्यो। ‘टाढा भएपछि प्रेमको महत्त्व बढ्छ भन्थे, हो रहेछ,’ सोनमले भने, ‘पहिले हप्तैपिच्छे भेट्दा खासै केही लाग्दैनथ्यो। अहिले कहिले लकडाउन खुल्ला र भेट्न पाइएला भनेर दिन गनेर बसेको छु।’लकडाउन सुरु भएको पहिलो साता सोनमलाई खासै नमज्जा लागेन। केही समय नभेट्दा के नै होला र भन्ने लागेको थियो। तर, लकडाउन लम्बिएपछि उनले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन्। चार दिनअघि उनी प्रेमिकासँग भिडियो कलमा ‘ट्रुथ एन्ड डेयर’ गेम खेल्दै थिए।
प्रेमिकाले उनलाई भेट्न आउने डेयर (चुनौती) दिइन्। ‘त्यसपछि धर्मसंकटमा परेँ,’ सोनमले भने, ‘नजाऊँभने गर्लफ्रेन्ड रिसाउली भन्ने टेन्सन,जाऊँ भने पुलिसले पिट्ला भन्ने पिर। त्यसमाथि कोरोनाको खतरा त छँदैछ।’ उनले प्रेमिकालाई भेट्न जाने उपाय खोज्न थाले। उनीसँँगै पढ्ने साथीको दूधको गाडी थियो। साथीलाई त्रिपुरेश्वरसम्म पुर्‍याइदिन आग्रह गरे। साथीले बिहान ६ बजे नै तयार भएर बस्न भने। ‘अघिल्लो रात राम्रोसँग निद्रासमेत लागेन,’ उनले सुनाए,‘बिहानै उठेर दूधको गाडी चढेर त्रिपुरेश्वर गएँ।उनी पनि तरकारी किन्ने बहाना गर्दै दूधको गाडी रोक्ने ठाउँमा आइपुगिन्। हामीले १० मिनेटजति सडकमा उभिएर डिस्ट्यान्स मेन्टेन गरेर कुरा गर्‍यौँ। त्यसपछि त्यही गाडीमा घर फर्किएँ।’
पिरती पलाउन नपाउँदै लकडाउन
ललितपुर, पाटनका अभिषेक कार्कीएक महिनाअघि प्रेममा परे।
विडम्बना,प्रेममा परेको महिनादिन बित्न नपाउँदै लकडाउन भयो। प्रेमिकासँग भेटघाट बन्द भयो। ‘निकै मेहनत गरेपछि बल्लतल्ल उनले मेरो प्रेम स्वीकार गरेकी थिइन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाले सब बर्बाद गरिदियो।’ पिरतीमा परेयता जम्मा दुई पटक मात्र डेटिङ जान भ्याएका छन्। ‘भेटघाट गर्न नपाएपछि गर्लफ्रेन्डले माया गर्न छाड्ने हो कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि लभ परेको भए सम्बन्ध बलियो हुन्थ्यो होला। भर्खरै सुरु भएको सम्बन्ध काँचो माटोजस्तै हुने भएकाले टिक्ने हो कि होइन, भर छैन।’
एक दिन प्रेमिकालाई भेट्न जाने जमर्को पनि गरेका थिए। पछि सोच बदलियो। ‘प्रहरीको फन्दामा परिएला भनेर गइनँ,’ उनले भने, ‘घरबाट पनि यस्तो बेलामा घरबाहिर निस्किन दिँदैनन्। बाहिर गए पनि बसेर कुराकानी गर्ने ठाउँ छैन।’
उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध अहिले फेसबुकको भरमा छ। ‘कहिलेकाहीँउताबाटमेसेजको रिप्लाई नआउँदा ब्रेकअप त गरिनन् भन्ने टेन्सन हुन्छ,’ अभिषेकले भने, ‘एकदिन उनले मेरो मेसेजको रिप्लाई गरिनन्। के गरौँ, कसो गरौँ भयो। भोलिपल्ट थाहा भयो घरको कामले फेसबुक चलाउन नभ्याएकी रहिछिन्। कहिले लकडाउन खुल्लाजस्तो भइसक्यो।’
कोरोनाकालमा बसेको पिरती
काठमाडौँ, नैकापका विशेष शिवाकोटी ववर्षौंदेखि एकजना युवतीलाई मन पराउँथे।‘दुवैजना जागिरे भएकाले देखादेख हुन्थ्यो, तर कुराकानी भने हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘फेसबुकमा भने हामी साथी थियौँ। म उनलाई औधी मन पराउँथेँ।’लकडाउन सुरु भएको दुई दिनपछि उनले ती युवतीलाई‘हाई’ लेखेरफेसबुकमा सन्देश पठाए। त्यसपछि उनीहरूबीच कुराकानी सुरु भयो।‘अफिस बिदा भएकाले दिनैपिच्छे फेसबुकमा कुराकानी गर्न थाल्यौँ,’ उनले भने, ‘एकअर्काका आनीबानी मन पर्न थाल्यो। बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म उनैसँग फेसबुकमा समय बित्न थाल्यो। मेरो बिहानी उनलाई नै मेसेज गरेर सुरु हुन थाल्यो र राति पनि उनलाई मेसेज नगरी निद्रा लाग्न छाड्यो।’ यही मौकामा विशेषलेती युवतीसँग प्रेम प्रस्ताव राखे। त्यसपछि युवतीले उनलाई सीधै ब्लक गरिदिइन्। ‘उनको मोबाइल नम्बरसमेत थिएन। कुराकानी गर्न थालेको छोटो समय नहुँदै प्रपोज गर्‍यो भनेर रिसाइन्जस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘त्यसको दुईतीन दिनसम्म हाम्रो कुराकानी भएन। तेस्रो दिन उनी आफैँले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइन्। त्यसपछि फेरि हाम्रो कुराकानी हुन थाल्यो। उनले मेरो प्रेम स्विकारिन्।’ अहिले उनीहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि साटासाट गरिसके।‘प्रेमसँगै हामीले फोन नम्बर पनि साटासाट गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘अहिले फोनमा घण्टौँकुराकानी गर्छौं। लकडाउनले गर्दा मेरो लभ पर्‍यो। कहिले लकडाउन खुल्ला र उनलाई भेट्न पाउँलाजस्तो भइसक्यो।’
यातना पाउन कोही किन क्वारेन्टिन बसोस् ?
क्वारेन्टिनको पहिचान : कोचाकोच र अपमान